साहुजीले कण्डम लगाएर बलात्कार गरेकाले श्रीमानसंग कुरो नखोलेकी हुँ….! – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ १४, सोमबार १२:०१	Top News, थप समाचार, विविध
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७५ जेठ १४ । ‘बैशाख २२ गते शनिवारको दिन थियो । घरमा खाने कुरा केहि थिएन । श्रीमानले ५ सय रुपैयाँ दिनु भयो र छोरी र म बजार तिर गएका थियौं । अरु सवै पसलहरु त्यस दिन सदाको शनिवार झै बन्द थिए । एउटा मात्र पसलको आधा सटर खुला थियो । त्यसका साहुजी संग समान किन्न थाले । त्यस वेला साहुजीले भित्र गोदाममा बोलाए । कण्डम निकालेर मेरो मुख थुन्दै पछाडीबाट वलात्कार गर्न सुरु गरे । त्यस पछि कसै संग केहि नभुन्नु गोदाम हेर्न पसेकी हुँ भन्नु भनेर सय रपैयाँ दिए । त्यो पैसा लिएर वाहिर निस्केर उनै कहाँबाट समान किनेर घर आएकी हुँ । मैले सोंचे कण्डम लगाएका थिए । मैले पेट बोक्दिँन क्यारे भनेर श्रीमानसंग त्यो कुरा मैले भनिन । तर छोरीले आमा र त्यो पसले भित्र धेरैबेर हराएका थिए भनेर भनिछ । त्यस पछि मैले त्यो सवै कुरा भनेर उनले दिएको सय रुपैयाँ पनि राख्न दिएँ । त्यस दिन देखि जाँड खाएर रातै दिन त्यसै संग जा भन्दै गाली गर्न थाले, पछि वलात्कारको मुद्दा दिन आएकी हुँ, नत्र गुपचाप नै राख्ने सोंचमा थिएँ । ’
हिजो आईतवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा तिनै पसलेले उक्त दिन बलात्कार गरेको भन्दै मुद्दा दिन आएकी महिलाको भनाई थियो यो । उनि ५ महिना अघि पाल्पाबाट गुल्मीका ४२ वर्षिय, श्रीमति गुमाएका एक पुरुष संग दोश्रो विवाह गरी आएकी २१ वर्षिया युवती हुन् । उनि बेला बेलामा चक्कर आउँने र वेहोस हुने विमारकी महिला थिईन् । मानसिक रुपले समेत विक्षिप्त उनि ५ महिना अघि पाल्पाको एक अस्पतालमा भर्ना भएको र पुर्व श्रीमानले त्यसै अस्पतालमा छाडेर भागे पछि अलपत्र परेर त्यही वसेको बताउछिन् ।
उनको वडा कार्यालयले मानसिक अबस्था समेत विग्रेको भन्दै सहयोग गर्न सवै संग अपिल पत्रको सिफारिस समेत दिएको छ । उनले भनिन–‘म अस्पताललमा अलपत्र थिएँ । त्यसै बेला उहाँ ( हालको श्रीमान ) पनि छोरीको उपचार गर्न जानु भएको थियो । उहाँले आफ्नो श्रीमतीको मृत्यु भएको र छोरीहरुको स्यार–सुसार गर्ने कोही नभएको भन्दै विवाहको प्रस्ताव गरे पछि म उहाँ संग आएकी हुँ । घर आए पछि उहाँले धेरै दिन सम्म आमा संग मलाई सुताउँनु भयो । एक दिन मैले उहाँका पनि छोरा नभएकोले कतै मैलै छोरा पाईपो हाल्छु कि बुढा भनेर भने । त्यस पछि त अहिले सम्म भित्र खाट राखेर सुत्ने गरेका छौं ।’
आज विहान तम्घासको एक होटलमा बुढा बुढी हाँशी खुशी वसी रहेका र एकले अर्को संग माया साटी रहेका उनिहरु उमेरले मात्र आधा फरक छन तर दाम्पत्य सम्वन्धमा एकरत्ती फरक नदेखिएको ब्यवहार प्रकट गरिरहेका थिए । ‘असाध्धै माया दिएर त यस्तो बुढो मान्छे नभनेकी हुँ, एकदम रुपासे र चञ्चले स्वाभावकी उनले प्रत्येक शव्दमा हुन्तो बुढा ? भन्दै उनको शरिरमा धाप लगाउँदै सुम्सुमाउँदै गरी रहेकी थिईन् ।
‘पहिला त म कम्ता पातली थिएँ र ? अहिले उहाँ संग आए पछि यसरी मोटाएकी छु, उहाँका छोरीहरुको पनि स्यार सुसार पुगेर मोटाएको देख्दा छिमेकीहरु पनि खुशी छन, हुँन्तो बुढा ? भन्दै श्रीमानको काँधमा टाउँको ओछाउन खोज्दै थिईन् । दुवैको हर शव्दमा मुस्कान थियो । चियाको चुस्की संगै दुवै विस्तरामा थिए । म भन्दा पहिला एक जना आफन्त उनिहरुलाई भेट्न पुगेका रहेछन् । म ढोका वाहिर रहञ्जेल भित्र उनिहरुको गुनगुन चल्दै थियो । हिजो देखि मलाई बारम्वार फोन गरेर सताएका उनिहरुको कुरा सुन्न म त्यहाँ पुगेको थिएँ ।
अँस्ती देखि आज सम्मको काम लिएर तानसेन पुगेको मलाई हिजो विहान देखि उनिहरु र उनका मान्छेले पटक पटक आई दिन आग्रह गरे पछि मेरो बाँकी काम थाँती राखेर म हिजो राती तम्घास फर्केको हुँ । वलात्कृत भनिएकी महिलाको भन्दा बढि फोन मलाई अर्की एक महिलाको आई रहेको थियो । आज विहान मैले के तपाई साँच्ची नै वलात्कृत भएको हो त ? भनेर सोंधे । जवाफमा उनी भन्दै थिईन, त्यस्तो उसले नगरेको भए किन यसरी यहाँ धाउनु पर्दथ्यो त ? भनेर प्रति प्रश्न गरिन् ।
उति बैलै नआएर किन यतिका दिन पछि मुद्दा दिन आउनु भयो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले श्रीमानले थाह पाए पछि आउनु परेको पटक पटक दोहराईन । हिजो सुरुमा सवै कुरा बताउन चाहेकी उनलाई प्रहरीले फोन राख्न भने पछि, पछि कुरा गरौंला सर भनेर फोन राखिन् । दोश्रो पटक फोन राख्दा उनको फोन एसपीसावले उठाएर अहिले छलफलमा छौं पछि गर्नु होला भनेर राखी दिनु भयो । साँझापख म जोर्तेमा आई पुग्दा उनको फोन आया्े । सर हामी बुढा बुढीलाई पो प्रहरीले कोठा भित्र थुनेर बाहिरबाट चुक्कुल लगाएर गए भनेर भनिन् ।
उल्टै पीडितलाई थुन्ने ? म भित्र यस्तो सवाल उठ्यो र यसपीसावलाई फोन हाने । उहाँले आफुबाट कुनै कम्जोरी नहुने अनुसन्धानले जे सत्य देख्छ त्यही अनुसार अगाडी बढ्ने बताउनु भयो । त्यस अघि प्रहरी श्रोतले ब्यापक रुपमा राजनैतिक दवाव आएको जनाएको थियो । कुनै पनि राजनैतिक दवावमा नपर्नु होला जे सत्य हो त्यही अनुसार अगाडी बढ्नु होला भन्ने आग्रह गरियो । पछि केहि अधिकारकर्मी पुगेर उनिहरुलाई बाहिर ल्याई एक होटलमा राखेको जानकारी पाईयो । रिर्पोटरको यो डायरी लेखि रहँदा समेत विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुको फोन आई रहेको छ । एक पक्ष भन्छ, अर्कै रिस ईवी फेर्न वलात्कार मुद्धा बनाईदै छ । अर्को पक्ष भन्छ वलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई सत्ताको दुरुपयोग गरी गुपचाप पार्ने षडयन्त्र गरिदै छ त्यस विरुद्ध हामी सशक्त ढंगले उत्रिदै छौं । वलात्कार आरोपीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिए पनि मुद्धा दायर नगरे सम्म उनको नाम विवरण गोप्य राखएको छ ।
यस हिसावले वलात्कार घटना सत्य होस या नहोस एक पक्ष वलात्कार अभियोग नै दर्ता गर्न लाग्दै छ भने अर्को पक्ष यदि निर्दोष नै हो भने पनि फस्दै छ भन्ने देखाउँछ । वलात्कार घटना पछि श्रीमान संगै सुतेको बताउँने ति महिलाको अहिले आएर मेडिकल रिर्पोटले वलात्कार ठहर गर्ने हो या होईन ? यो पनि हेर्न बाँकी छ । त्यो सय रुपैयाँ र सर–समानमा चुपो लागरे बसेकी ति महिला अहिले मुख त खोलीकी छन कतै अरुले जस्तो जिव्रो वटार्ने हुन कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ । किन कि हाड नाता करणी जस्तो डर लाग्दो घटनाकी महिलाले समेत पछि जिब्रो लर्वराउने गरेको पनि पाईएको छ ।
जुन महिलाले बलात्कार घटनामा जेल हालिन उनै महिलाले जेलमा मिठो–मसिनो खान लगी दिने गरेको पनि प्रहरी श्रोत बताउँछ । वलात्कार एक, प्रकृति अनेक देखिएका छन र त्यस अनेकतालाई राम्ररी केलाउनु पर्ने पनि देखिएको छ । वलात्कार अभयोगीका पक्षधर भन्छ –‘केहि दिन स्थानिय एक परिवारले खाएको ऋण नतिरे पछि प्रहरीमा उजुरी दिईएको थियो । त्यस पछि ५० हजारको तमसुक बनाईएको थियो । त्यसको दोश्रो दिन देखि ती वलात्कृत भनिएकी महिलाको घरमा ती तमसुक बनाईएकी महिलाको घरमा आवत जावत बढेको थियो । सत्य के हो ? प्रहरी अनुसन्धानले बताउला । यी र यस्ता कतिपय वलात्कार मुद्धाका नजिरले एकातिर महिलाले चाहे बचाउन र नचाहे फसाउन पनि सक्दो रहेछन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । समग्रमा महिलाबाट पुरुषको जीवन हरपल उच्च जोखिममा छ ।
यहाँ अमृत अनि जहर उस्तै उस्तै लाग्छ …